eDeshantar News | साहित्य Archives - Page4of 17 - eDeshantar News साहित्य Archives - Page4of 17 - eDeshantar News
सर्वोच्चद्वारा आयोगको निर्णय बदर , नेकपा को नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने
नेपाली साहित्यको विकासको प्रस्थान वीर धाराबाट सुरु भएको मानिन्छ । पछि कृष्णभक्ति धाराको छहारीमा केही विश्राम, केही उत्थान र विकास प्राप्त गरेर रामभक्ति धाराले चरम उत्कर्ष प्राप्त गरेको पाइन्छ । रामभक्ति धाराका सशक्त, प्रखर एवं प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुन् । यिनका महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय कृति ‘रामायण’, समाजको आवश्यकतालाई बुझेर लेखिएको देखिन्छ ।…
नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यकाे आज २०७ औँ जन्मजयन्ती हाे । प्रत्येक असार २९ गतेका दिन उनकाे सम्झनामा ‘भानुजयन्ती’ मनाउने गरिन्छ । भानुकाे सम्झना यस दिन विभिन्न कवि गाेष्ठी तथा साहित्यिक कार्यक्रमहरु र महाेत्सवहरू आयाेजना गरी मनाइने गरेकाेमा यस वर्ष भने काेराेना महामारीका कारण खासै गतिविधि छैन । तर काव्यानुरागी र भाषासेवीहरूले भानु याेगदानकाे स्मरण…
कोरोना विश्व–महामारी बनेको छ । महामारी अरू पनि आएका छन्, संसारभर । त यस्तो महामारी पहिले न देखियो, न सुनियो । त्यसैले यसलाई ‘नोभेल’ भनियो । हुन त सोसल मिडियामा सय वर्षअघि आएको थियो, भोलि दुई सय–तीन सय वर्षको पनि इतिहास आउला । ती अनुसन्धानका विषय हुन् । हाललाई यसलाई देख्ने–भोग्ने–सुन्ने यस संसारमा छैनन् ।…
“भूमिका कृतिको आधारभूमि हो । रचनाको परिवेश र लेखकीय जीवनदृष्टिको प्रक्षेपणका आलोकमा कृतिको मूल्य प्रस्तुत गर्ने चासोसमेत भूमिकामा रहन्छ । कृतिकार र कृतिको सहसम्बन्धलाई पनि भूमिकाले स्पष्ट्याएको हुन्छ” प्रस्तुत भूमिकाको परिभाषा भूमिका लेखक गोपीकृष्ण शर्माले ज्ञाननिष्ट ज्ञवालीद्वारा लेखिएको “भूमिका सिद्धान्त...
कविता : ‘बेसारे पानी,काेराेना जानी’
ए नेपाली ! निडर बन है फर्मुला खाेज भा"छ केपीजीकाे प्रखर मुखले जानियाे भन्नु भा"छ स्वाट्टै पार्नू सहज घरमै मिल्छ बेसार -पानी च्वाट्टै हाेला अलिक दिनमा हाच्छ्युँ गर्दा कहानी ।। * उच्चा पाखा वनचहुरमा औंषधी नित्य झर्छ नेपालीले हर पल...
“मानिस र व्यक्तिमा फरक छ । सबै व्यक्ति मानिस हुन सक्छ तर सबै मानिस व्यक्ति हुन सक्तैन ।” मानिस एउटा समाजमा बस्छ तर ऊ सामाजिक नहुन पनि सक्छ । घर–परिवारमा मात्रै रमाएर बस्ने एकथरी मानिसहरू पनि हुन्छन् । त्यो तिनीहरूको...
कथा : द्वन्द्वको चर
महिना बढी भयो होला कमलराजको पढाइमा त्यतिधेर रुचि छैन । घर काम गर्नु त परै जाओस् सरले कक्षामा पढाउँदा पनि एकोहोरो टोलाइरहन्छ । पाठको अन्त्यसँगै देवीरमण सरले ठूलो स्वरमा सबैलाई एकैपटक सोध्नुहुन्छ ? विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तिमीहरूले बुझ्यौ यस कथाको सन्देश...
म सीधा कुरामा यही भन्छु खास लुटी राज्य आफ्नै जुटाऊ विलास छ तिम्रै यहाँ नित्य खाँडाे बलेकाे कले देख्छ जन्ता चितामा जलेकाे ? भयाे देश बिर्ता र स्वामी तिमी नै तिमी मात्र धर्ता र भाेक्ता तिमी नै अरू दास भाेकै...
काठमाण्डौ । कवि तथा गीतकार रत्नशमशेर थापाको आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ । उपचारका क्रममा बिहीबार निधन भएका थापाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्न लागिएको हो । अन्त्येष्टि अघि कलाकार संघका सदस्यहरुले उनले लेखेको गोरेटो त्यो गाउँको बोलको गीत गाएर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको...
काठमाडौं । बरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन भएको छ । उपचारका क्रममा उनको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो । बुधबार बेलुकी अस्वस्थ भएपछि उनलाई उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल पुर्याएको थियो । आज बिहान साढे ११ बजे उनको निधन भएको...